‘सरकारले खाल्डा देख्दैन, देखेर पनि पुर्दैन’ - Goraksha Online
तुलसीपुर, ७ कार्तिक । देशमा तीन तहको सरकार छ, सडक संरचना भताभुङ्ग छ । बजेट छैन भने वर्षेनी बजेट आउँछ तर बजेट लथालिङ्ग छ । सकारले कालोपत्रे सडकमा भैँसी आहाल बस्ने खाल्डा देख्दैन अनि देखेर पनि स्थानीय सरकार वेखबर छ ।
शनिवार आफ्नो व्यवसायीलाई थाँती राखेर सडक मर्मतमा लागेका साना यातायात व्यवसायीहरू गुनासो गरिरहेका थिए । ‘सडकको अवस्था भताभुङ्ग छ, न सरकारले खाडलहरू पुर्छ न हाम्रो कुरा सुन्छ, हैरान भएर हामी आफै खाडल पुर्न लागेका छौँ’, अटो व्यवसायी बामदेव भण्डारीले भने । उनीसँगै सल्यान रोडमा अटो सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू हातमा सडक निर्माणका लागि औजार लिएर खाडल पुरिरहँदा यो देशमा सरकार छ÷छैन ? छ भने कहाँ छ ? भन्ने प्रश्नहरू सबैको मनमा उब्जिएको छ ।
वर्षातसँगै कालोपत्रे सडकमा ठूला–ठूला खाडल परेसँगै कोहीँकसैले यसको निर्माणमा नलागेपछि आफूहरूले आफ्नो व्यवसाय एक दिनलाई थाँती राखेर सडक निर्माणमा लागेको अटो व्यवसायी खड्गबहादुर चन्दले बताए । त्यस्तै अटो चालक बसन्त श्रेष्ठले दैनिक अटोहरू दुर्घटना हुँदा लाखौँको क्षति भएपछि आफूहरू बाध्य भएर सडक मर्मतमा लागेको गुनासो गरे । ‘हिजो कालोपत्रे सडकमा परेको खाडल बचाउन खोज्दा अटो दुर्घटना हुँदा ६० हजार खर्च भयो, दैनिक यस्तै अवस्था देखेपछि हामी यो अभियानमा लागेका हौँ’ श्रेष्ठले भने ।
उनीहरूजस्तै सल्यान रोडमा अटो चलाउँदै आएका सबै अटो व्यवसायीहरूले शनिवार दिनभर सल्यान रोडको करिब ५ किलो मिटर सडकमा परेका खाडलहरूमा माटो र गिट्टी हालेर पुर्ने काम गरेको अर्का अटो चालक सन्तोष विश्वकर्माले बताए । त्यस्तै अटो चालक तिलक वली, विवेक श्रेष्ठले पनि सडकमा परेका खाडलका कारण दिनहु आफूलगायत अन्य यातायात व्यवसायीहरू दुर्घटनाको जोखिममा पर्ने गरेको भन्दै उनीहरूले समयमै सडक मर्मत नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरे ।
‘केन्द्रका नेताहरू आकाशमा उड्छन् स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधि यही सडकबाट दैनिक ओहोर–दोहर गर्दा पनि कोही कसैले यसतर्फ ध्यान दिँदैनन्’ – साना सवारी चालकहरूले गुनासो गरे । त्यस्तै वर्षेनी सडक मर्मतका नामा ठूलो रकम आउने गरे पनि एकतर्फ बनाउँदै गर्दा अर्कोतर्फ सडक बिग्रँर्दै गरेको चालक सुमन केसीले गुनासो गरे ।
तुलसीपुरको मुख्य सडक होस् वा राजमार्ग वा सहायक राजमार्गका सडकहरूमा परेका खाडलका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । ‘सडकै भरि खाडल छन् हामी कोरोनाको संक्रमणले थला परेको यातायात व्यवसयायीहरू थप पीडामा छौँ’ –यातायात व्यवसायी निमकुमार श्रेष्ठले भने । उनले स्थानीय सडक स्थानीय सरकार र राजमार्ग तथा अन्य सहायक राजमार्ग अन्य सरकारले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि त्यो हुन नसकेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
सहायक राजमार्गदेखि गाउँका भित्रि सडकहरू पनि कार्तिके झरीले गर्दा काम नलाग्ने भएको गुनासो सर्वसाधारणहरूको छ । ‘हिजो सडकमा जमेको पानीमा मोटरसाइलक पल्टिँदा एक जनाको खुट्टा भाँचियो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ स्थानीयबासी बालकृष्ण केसीले भने । उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सडक सञ्जाल विस्तारका लागि प्राधिकरण गठन गरी कालोपत्रे गर्ने भने पनि त्यसको उपलब्धि भने हुन नसकेको गुनासो गरे ।
त्यस्तै सडकको स्तरोन्नी गर्दा पनि आवश्यकताको भरमा भन्दा पनि पहुँचका भरमा गर्दा समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । कुनै वडाहरूमा कालोपत्रे सडक वर्षेनी बढेको छ भने कुनै वडाहरूमा स्थानीय सडक पनि हिलाम्मे हुने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसैगरी कम खर्चमा धेरै उपलब्धि देखाउने होडका कारण पनि सरकारको पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तै हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
यसैगरी सीमित सवारी साधन र सीमित लोडका लागि बनाएका सडकहरूमा हेबी गाडीहरू गुड्दा सडकको आयु कम हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा तुलसीपुरका मेन सडक तथा अन्य गाउँमा भर्खरै कालोपत्रे भएका सडकहरू पनि कालोपत्रे उत्रिएर खाडल परेर हिलाम्मे र धुलाम्मे हुने गरेका छन् ।